Mountain Television nation's first popular and leading analytical news channel. Mountain covers all the latest news from Nepal, Political News, Science news, Social news, Sport news, Ecomony news, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview and many more. कोशी अञ्चल अस्पतालमा राती ११ बजेपछि इमर्जेन्सिमा समेत डाक्टर बस्दैनन् – Emountain TV
कोशी अञ्चल अस्पतालमा राती ११ बजेपछि इमर्जेन्सिमा समेत डाक्टर बस्दैनन्
मोरङ, २९ भदौ । गाउँ गाउँमा स्वास्थ्य केन्द्र भएपनि डाक्टर नभएको गुनासो बारम्बार आईरहन्छ । हुँदा हुँदै अञ्चल अस्पताल विराटनगरको अवस्था पनि त्यस्तै देखिएको छ ।
विराटनगरमा रहेको कोशी अञ्चल अस्पतालले सेवा प्रभाव चुस्त दुरुस्त बनाउनु त परै जावस् रातीको समयमा डाक्टरसमेत भेट्न मुस्किल पर्न थालेको छ । अस्पतालमा रातीको समयमा ४ जना कर्मचारीको दरवन्दी रहेको छ । तर, राती ११ बजेपछि इमरजेन्सी सेवामा कुनै डाक्टर भेटिदैनन् ।
अञ्चल अस्पताल अहिले रातीको समयमा अनमी, हेल्परको भरमा चलिरहेको छ । यस अस्पतालको गुनासो वारम्वार आएपछि माउन्टेन प्रदेश १ टिभिका संञ्चारकर्मीहरु गत वुधवार रातभरी कोशी अञ्चल अस्पतालमा समाचार संकलनमा जुटेका थिए । तर, त्यो दिन कोहीपनि डाक्टर रातीको समयमा आएनन् ।
स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशिल क्षेत्रमा विराटनगर स्थित अञ्चल अस्पतालले वारम्वार लापरवाही गर्दै आईरहेको छ । यस विषयमा प्रतिक्रिया लिन खोज्दा अस्पतालका प्रमुख मेडिकल सुपरिटेन्ड रोसान पोखरेलले कुनै प्रतिक्रिया दिन मानेनन् ।